News 18 Nepal || अन्तराष्ट्रिय
भारतमा ४ महिना यताकै कम संक्रमित थपिए, मृत्युदर पनि घट्यो
एजेन्सी । भारतमा थप ३० हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीन महिना अघिसम्म लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३० हजार १२५ जनामा संक्रमण भएको छ । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या ३ करोड १४ लाख ३९ हजार ७६४ पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा ४ लाख ५ हजार ३०६ जना संक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै त्यहाँ एकै दिन ४१५ संक्रमितको ज्यान...
एजेन्सी । चीनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका गर्न विभिन्न सुधारका नीतिहरु अघि सारेको छ । चीनले विशेष गरी निजी शिक्षण संस्था सुधारका लागि नीतिहरु सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पुँजीमार्फत कब्जा गरिएको भन्दै चीन सरकारले सुधारका लागि नयाँ नियमहरु ल्याएको हो । नयाँ नीतिले विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यक गृहकार्य तथा कलेज सकिएपछिको ‘एक्ट्रा क्लास’ को बोझ कम गर्ने बताइएको छ । गत साता सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियम अनुसार विद्यालयको पाठ्यक्रम पढाउने संस्थाहरुले...
कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि डा. फाउचीले दिए चेतावनी
एजेन्सी । अमेरिकाका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थनी फाउचीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न बाइडेन प्रशासन गलत दिशामा गइरहेको बताएका छन् । अमेरिकामा पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि डा. फाउचीले उक्त प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । उनले अमेरिकामा कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट खोप कम लगाएका क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताए । अमेरिकाले गत मे देखि मास्क लगाउन नपर्ने नियम ल्याएसँगै संक्रमण बढेको बताइन्छ । ...
भारतमा कोरोना कहर, संक्रमितसँगै मृत्युदर पनि घट्दै
एजेन्सी । भारतमा थप ३८ हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीन महिना अघिसम्म लगातार ४ लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ३८ हजार १५३ जनामा संक्रमण भएको छ । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या ३ करोड १४ लाख ९ हजार ६३९ पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा ४ लाख १७ हजार २४४ जना संक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै त्यहाँ एकै दिन ४११ संक्रमितको ज्यान...
बन्जीजम्प गर्ने क्रममा युवतीको मृत्यु, गलत इशारा पश्चात हतारमै हाम्फालिन्
एजेन्सी । बन्जी जम्प गर्ने क्रममा एक युवतीको ज्यान गएको छ । बन्जीको डोरी नै नबाँधीकन ती युवतीले हाम्फालेपछि उक्त दुःखद घटना भएको हो । घटना कोलम्बियाको हो । साहसिक खेल मानिने बन्जी जम्प पछिल्लो समय युवाहरुमाझ लोकप्रिय छ । तर, सावधानी नअपनाउँदा मनोरञ्जनको साटो मृत्यु प्राप्त हुने कुरा गत आइतबार घटेको कोलम्बियाको उक्त घटनाले पुष्टि गरेको छ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार उत्तरी कोलम्बियाको एन्टिओक्विया प्रान्तको अमागामामा आफ्नो प्रेमीका साथमा...